The Best Winter Festivals In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > The Best Winter Festivals In Europe
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 15/12/2019)
Kunyatsoshandisa kutonhora mwaka kushanyirazve Best Winter Festivals in Europe. Mitambo inosanganisira zvose kubva Skiing uye Snowboarding kuti mumhanzi, mutambo, Ice zvivezwa, , ikapenya haradhi vaipemberera. Pasi pamusoro yedu 5 roundup chii Uchaona zvichiitika muEurope muna January uye Kukadzi.
Anorega kutanga Winter Festivals in Europe, uye isu chose kuenda Scotland
Edinburgh Hogmanay ndiye mumwe munyika yakanakisisa New gore Celebrations, munhu zvechokwadi mhuka uye wooly andapeni chiitiko. Hogmanay ndiro wokuScotland shoko New Year Evha uye Hogmanay mutambo Edinburgh chave rimwe remasangano kupemberera Gore Idzva munyika. Edinburgh kwakaita Hogmanay mutambo 3-zuva azere zviitiko kuti zvinosanganisira torchlight nomudungwe, mhenyu mumhanzi Concerts, zviitiko mhuri, Bato mugwagwa hombe, chinyakare kutamba, mafayawekisi, uye kunyange costumed achimisa kuti rinopera munhu chando Dip murwizi!
London kwakaita Hyde Park Winter inoshamisa anodzoka kuna Hyde Park mu 2018 wayo ikapenya chando Rink, hombe Christmas pamusika uye mafaro pamu Vatasvi. Iva nechokwadi iwe tora mari uye svika mangwanani kudzivisa kurasikirwa zvinoshamisa Vatasvi anogona kutengesa kunze kutsanya! Winter inoshamisa iri akaipa nevakawanda, uye tinogona kuronga Winter yedu Best Festivals in Europe pasina paakataura nayo!
Anovhenekera mazuva erima uye usiku Luxembourg City ndizvo Winterlights Luxembourg. Mabasa akawanda uye zviitiko pamusoro kupawo dzose mhuri, ari Christmas misika kuramba wapamwoyo yakasimba! Unogona kutarisira dzakaitwa nemaoko zvinhu, mbatya, zvokutambisa, zvishongedzo uye chokwadi (yedu kufarira) zvizhinji zvinonaka chikafu vakangomirira kuti vakaravira! Kubva chinyakare “mbatatisi Kichelchen” kuti zvimwe zvekumwe siyana kubva kure-akakandira dzokugara, ipapo akasungwa kuva chinhu wose.
Mushori kuna Luxembourg Zvitima
Venice munguva The Carnival ndiko kuwedzera ruvara uye mufashoni okugadzira zvinhu. Izvi zvinoita kuti musiyano akanaka kune chilli chena chando. haradhi (kana "Carnival") ari mumwe guru Kupemberera muItaly-uye kubva Venetian nezvifukidziro anoedzesera balls, hapana nzvimbo anozviita kufanana Venice! Kufanana pfungwa yokuona guta panguva yaro kupfuura pamitambo uye mavara? Zvadaro izvi pamusoro wako mazita Best Winter Festivals in Europe.
sarudzo dzedu okupedzisira nokuda Winter Festivals in Europe ndiyo: Amsterdam
Kutsvaka zvinopfuura cultured? Zvadaro bhuku tikiti renyu panze kuratidza inonzi Amsterdam Festival Light. The Chiitiko kunokwezva yakanakisisa yenyika uye dzakawanda chiedza Artists kuti showcase basa ravo yose Amsterdam centre uye pamwe ayo wakakurumbira migero. chiitiko gore rino anomhanya kubva 29 Mbudzi 2018 kusvikira 20 Ndira 2019. gore negore, mazana submissions vari pasi ne vagadziri, ezvivako, uye vemifananidzo pasi pose.
The chiedza unyanzvi zvivako of Amsterdam Light Festival mvura kuratidza jekesa ose zuva kubva 5 pm kusvikira 11 pm. The Amsterdam Festival Chiedza chiri pachena mhepo uye akasununguka vose. mukana Great kutora hunoshamisa mifananidzo!
The best way to experience this pick of Winter Festivals in Europe is to visit the water exhibition is nechikepe. Canal rwendo Makambani kupa vanotungamirirwa chaiyo kufamba kwokunakidzwa pamwe mifananidzo. The Amsterdam Light Festival Cruise zvinotora 75 maminitsi.
Unoda kushanyira chimwe chaizvozvi Winter Festivals in Europe? Zvino pane nzira imwe chete uye nzvimbo imwe kuzviita. SaveATrain, No Mugshot yechikoro, hapana dzichikunetsa! Book ikozvino!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-festivals-europe%2F - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / of kune / ja kana / Ave uye mimwe mitauro.
#mitambo #winterfestival #Winterfestivals europetravel longtrainjourneys chitima mazano Train Travel travelamsterdam chando Winterholiday